“पाँच वर्ष देशलाई जस्ताकोतस्तै सुरक्षित राख्न सके ठूलो उपलब्धि” « News of Nepal
सरकारले राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र सरकारको नेतृत्व छोड्ने अडान लिएको छ भने वाम गठबन्धनले तत्काल नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि दलहरूबीच एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विषयमा देखिएको विवाद बढ्दै गएको छ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दल भने विवादमा रुमलिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको गठन, नयाँ सरकार निर्माण र अहिले राजनीतिक दलको बीचमा देखिएको विवादको समाधान के हुन सक्छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः